CABDIWALI GAAS OO KU DHAWAAQAY MUSHARAXNIMADIISA PUNTLAND 2019 | Goojacade
Home War CABDIWALI GAAS OO KU DHAWAAQAY MUSHARAXNIMADIISA PUNTLAND 2019
CABDIWALI GAAS OO KU DHAWAAQAY MUSHARAXNIMADIISA PUNTLAND 2019
Madaxwaynaha maamulka Puntland, Cabdiweli Gaas ayaa maanta ku dhawaaqay inuu mar kale ka qaybgalayo doorashada madaxweynaha ee Puntland ka dhacaysa 8 Jannaayo ee sannadka 2019ka.
Cabdiweli ayaa afar qodob ku soo koobay sababta uu mar kale u tartamayo, kuwaas oo kala ah
1- Dhammeystirka howlihii uu ballanqaaday.
2- Dib u habeynta dowladnimada.
3- Dhisidda ciidan xoog leh.
4- Dib u xoreynta deegaannada maqan. “
Wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey Cabsida uu ka Qabo Puntland oo Weligeed aan madaxwayne laba jeer la dooran “ Shantii sanaba Madaxweyne cusub in la doorto Puntland ayay carqalad ku tahay”. Ayuu yidhi Gaas.
Dhinaca kale Islaan Ciise Islaan Maxamed oo kamid ah Isimada dhaqanka oo ka hadlay Munaasibada C.wali Gaas wuxuu yidhi “ Maanta ka hor xaflad musharrax la igama yeedhin, malaha madaxweynuhu culeys buu dareemay, doorashadii horeba 2014 waa joognay noomana yeedhin, Madaxwayne khayr hadduu kugu jiro Alle ha kugu guuleeyo.
“ Hanagu eedeyn oo ha odhan isimadda waxbaa si ka ahaa, Labadii arrimood Madaxweyne midna ma hayno, idan Alle ma hayno, luuqii yaraana gali mayno ( Goobta Doorashada ) marka wixii Illahay kaaga soo qaado ku qanac”.
Previous articleMaraykanka oo sheegay in uu Al-shabaab ka dilay 62 xubnood
Next articleMareykanka oo ku dhowaaqay lacagtii ugu badneyd oo uu ku maal-gelinayo Soomaaliya